> Resource > Android > taageerayaan Video qaabab u Android - Document rasmiga Non
Ma dooneysaa inaad ogaato wixii qaabab video waxaa taageera telefoonada Android si aad u ciyaari kara video on Android, horumarinta socon codsiyada video, ama horumarinta website ka taageera telefoonada Android? Raadi jawaabahaaga halkan su'aalo ku saabsan Android qaabab video iyo kuwa kale.
Sidoo kale eeg : Sida loo saar Videos on Android Phones
Android ay taageerayaan Video qaabab
Shaxda hoose waxay muujinaysaa waxa gudbiyo telefoonada Android iyo taageero kiniinno, macluumaad codec iyo filename kordhin labada bixiyo. Si kastaba ha ahaatee, codsi Android isticmaali kartaa codecs warbaahinta sidoo kale bixiyaan wax kasta oo qalabka ku shaqeeya Android-, ama codecs warbaahinta dheeraad ah ee ay shirkadaha dhinac saddexaad. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad ka ciyaari videos on Android, ka heli a video ciyaaryahan multi-format ama badalo videos in qaabab socon Android.
Shaxda 1 : Video qaabab u Android
1. Qaar ka mid ah telefoonada Android siin karaan taageero u qaabab dheeraad ah ama nooc file aan taxay jadwalka ku qoran. Sidoo kale, qaar ka mid ah qaabab video karaa oo keliya oo ay taageerayaan ka dib versions Android. Si loogu badalo Android videos, waan ku sujuudayaa talinaynaa Wondershare Video Converter - badasha wax video in qaab kasta, dhammaan qalabka joogto ah.
2. audio iyo qaabab image u Android, eeg hoos.
Qaabab Audio : MP3, 3GP, MP4, M4A, AAC, TS, FLAC, OGG, MKA, regelingen, bartamaha, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, Ota, IMY
Qaabab Image : JPG, GIF, PNG, BMP, WEBP.
Samee Video Playable on kasta Android Phone
Hoos waxaa ku soo koobin Deji talinayaa in Android video ka Android sameeysa homepage. Video kasta oo xuduudaheedu yihiin playable on telefoonada Android. Qalab kaliya ee aad u baahan tahay a Converter video ama riixo software video in la beddelo koobin video Deji.
Shaxda 2 : talinayo Video Halbeegyada Android
Fiiro gaar ah: Wondershare Video Converter Ultimate waa video Converter caan Android iyo dhammaan qalabka loo jecel yahay. Waxa keliya ma aha kuu ogolaanaya in aad loogu badalo wax video la fursadaha customizable (cabbir kasta oo kor ku xusan oo ay taageerayaan), laakiin sidoo kale kaa caawin in aad daawato filimada DVD ku saabsan telefoonada Android ay diinta DVD in Android socon qaabab video. Sii isku day ah.
Su'aalaha kale ee ku saabsan Android Video qaabab
Waxa kale oo jira su'aalo kale oo la is weydiiyo by Android isticmaala. Halkan waxa ah tusaalayaal.
Sidee baan u bedeli kartaa qaab video of video ah Android?
La mid ah si loogu badalo video inuu u ciyaaro ee telefoonada Android, mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale u baahan tahay inaad wax ka bedel video ka dib wareejinta ka telefoonada Android inay computer. Guud ahaan, inta badan taageero barnaamijka video tafatirka Android qaabab video sida MP4, 3GP, MKV, iwm Haddii videos ee ma taageersana barnaamijka aad, waxaa aad loogu badalo karaa jecel aad video Converter, sida Video Converter.
Video qaab u Droid iyo telefoonada kale Android?
Droid waa model telefoonka ah oo caan ah Android ka Motorola. Qaabab video ee Droid la mid tahay telefoonada kale Android. Si aad u cad, inay yihiin H.264 (.mp4), MPEG-4 (.mp4), iyo H.263 video la Amr audio (.3gp), WMV9 (.wmv).
Waa maxay video ah ciyaaryahan ugu wanaagsan Android u qaabab kala duwan
Waxaa jira dad badan ciyaartoyda video in ay taageeraan ku dhowaad kasta oo ah qaabab video, oo ay ku jiraan MP4, 3GP, wmv, MKV, AVI, FLV, MOV, M4V, iwm aan ugu jeclaa shakhsi Android video ciyaaryahan waa MoboPlayer, gebi ahaanba bilaash ah oo dhan-in-mid. Eeg dheeraad ah ciyaartoyda video for Android >>